ပြည်သူကိုပေးထားသည့် ကတိများတည်ရန်မှာ အစိုးရ၏ တာဝန်ဟု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဆု - Yangon Media Group
အစိုးရ၏ တာဝန်သည် ပြည်သူကိုပေးထားသည့် ကတိများတည်ရေးပင်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ပြောကြားလိုက်သည်။ ဧပြီ ၁ ရက် ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး မြောင်းမြတံတားဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၌ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
”အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားကို တာဝန်ယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာ ပြည်သူကိုပေးတဲ့ကတိတွေ တည်ဖို့ဆိုတာဟာ အင်မတန်မှကို အရေးကြီးပါတယ်။ ပြည်သူနဲ့ အ စိုးရကြားမှာ ယုံကြည်မှုရှိဖို့၊ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ယုံကြည်ဖို့၊ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးလေးစားဖို့ဆိုရင် နှစ်ဖက်စလုံးက ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ကျေပြီး တော့ ကိုယ့်အခွင့်အရေးတွေကိုလည်း ကိုယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရပါ မယ်။ အစိုးရရဲ့တာဝန်တစ်ခုဟာ ပြည်သူလူထုတွေကို ပေးထားတဲ့ ကတိတွေကို တည်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပေးထားတဲ့ ကတိအတိုင်း ဒီတံတားကို ဒီနေ့မှာ ဖွင့်နိုင်တာကို အင်မတန်မှဝမ်းသာပါတယ်” ဟု နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ကပြောသည်။
မြောင်းမြကြိုးတံတားဟောင်း သည် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ တွင် ကြံ့ခိုင်မှုအားနည်းခြင်းကြောင့် ကျိုးကျခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပြီး ယနေ့ တစ် နှစ်ပြည့်သည့်နေ့တွင် တံတားသစ် ကို ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မြောင်းမြကြိုးတံတားကျိုး ကျပြီးနောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင် ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင် လာရောက်ခဲ့ ပြီး တစ်နှစ်အတွင်း ပြန်လည်တည် ဆောက်ပေးမည်ဟု ကတိပေးခဲ့ ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်တွင် တိုင်း ပြည်တိုးတက်ဖို့အတွက် အဓိက တာဝန်ရှိသည်မှာ ပြည်သူပင်ဖြစ် ကြောင်း၊ သို့မှသာ မိမိတို့အတွက် ကောင်းမွန်သည့် အစိုးရကို မိမိ တို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်နိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးကိုတာဝန်ယူသည့် အစိုးရတစ်ခုအနေဖြင့် ပြည် သူကိုပေးထားသည့် ကတိတည် ရန်အလွန်အရေးကြီးကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
ယင်းအပြင် အစိုးရဌာနအသီးသီးအနေဖြင့် စီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် တင်ဒါလုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ကြရန်၊ သတ်မှတ်အရည်အသွေး မီအောင် ဆောင်ရွက်ကြရန်လည်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က သတိပေးသည်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အခြားသော ကြိုးတံတား ဟောင်းများဖြစ်သည့် လပွတ္တာတံ တား၊ ဝါးခယ်မတံတား၊ ရွှေ လောင်းတံတားတို့ကိုလည်း လက်ရှိအချိန်တွင် အဆင့်မြှင့်တင်တည် ဆောက်လျက်ရှိသည့်အတွက် အဆင်မပြေမှုရှိပါက သည်းခံပေးကြရန် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်က မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။
ရှစ်နှစ်တာ အတွင်း မြန်မာ – ထိုင်းနယ်စပ် တာချီလိတ် ချစ်ကြည်ရေး တံတား၌ တရားမဝင် မြန်မာအလုပ်သမ?
ဒါရိုက်တာ ဏကြီး၊ သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသု၊ ဒါရိုက်တာ ခရစ်(စ)တီးနားခီ၊ သရုပ်ဆောင် ဇဏ်ခီတို့ကိ
တောင်ဒဂုံ ဆူပူမှု ဦးဆောင်သူ မိုက်ကယ်ကျော်မြင့် အမှု တရားလို အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို စတင်စစ်ဆေး
ချင်းတွင်းမြစ် အထက်ပိုင်း၌ သောင်ထွန်းမှု များပြားသည့် အတွက် အညာဆန်ရေယာဉ်များ သွားလာရေး အခက??